Home News Gudoomiye Axmed Shiidka loo Xil ka Qaadis Lagu sameeyay!!
Gudoomiye Axmed Shiidka loo Xil ka Qaadis Lagu sameeyay!!
Wareegto kasoo baxday xafiiska Wasiirka Arrimaha gudaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadlle ayaa waxaa xilka looga qaaday Guddoomiyihii Degmada Warsheekh ee Gobolka Shabeellaha Dhexe,isagoona u magacaabay Degmada Guddoomiye cusub.
Guddoomiyaha cusub ee Degmada Warsheekh ayaa waxaa loo Magacaabay in uu noqdo Cumar Maxamed Cumar,kaasi oo bedelaya Guddoomiyihii xilka qaadista lagu sameeyay ee Col. Axmed Xuseen Axmed (Shiidka).
Previous articleGobolka Waqooyi Bari Kenya oo caqabad ku qabo Goobo muhiim ah oo ay Ciidamadu Saldhigyo ka dhigteen!!
Next articleGudigga Difaaca oo u Yeeray Wasiirka Gaashaandhigga Iyo Taliyayaasha Ciidamada